Philippines Duterte: COVID-19 ndị emebi iwu? Gbaa ha nwụrụ!
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Safety » Philippines Duterte: COVID-19 ndị emebi iwu? Gbaa ha nwụrụ!
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Crime • omenala • Akụkọ Ọchịchị • Ihe Ndị Ruuru Mmadụ • News • ndị mmadụ • Ozi Na -agbasa Ozi Philippines • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Onye isi ala Philippines Rodrigo Duterte
N'ime oge ekwenti ekwuputaghi na televishọn n'abali Wenesde, onye isi ala Philippines, Rodrigo Duterte, duputara ndi amaala aka na nti, ndi mebiri ihe mgbochi. nje Corona Nsogbu - mebie mgbochi iche ma ị nwere ike ịgbanye ebe ahụ, ebe ọ bụ na ndị agha nchebe Philippines nwere iwu ugbu a ka ha gbaa ndị na-eme ihe ike 'ka mba ahụ na-alụ ọgụ maka ntiwapụ ahụ.
N'ịdọ aka na ntị dị egwu, Duterte gwara ndị uwe ojii na ndị agha ka ha were ụzọ mgbapụ maka ndị mebiri mkpọchi mkpọchi na Luzon - agwaetiti kachasị ukwuu na nke ọtụtụ ndị mba - nyere iwu n'ọnwa gara aga iji gbochie mgbasa nke coronavirus.
“Agaghị m ala azụ. Iwu m nyere ndị uwe ojii na ndị agha, yana [mpaghara], na ọ bụrụ na enwere nsogbu ma ọ bụ ọnọdụ eteta na ndị mmadụ na-alụ ọgụ ma ndụ gị dị n'ahịrị, gbagbue ha, "Onye isi ala ahụ kwuru.
Duterte nyere adreesị ya awa ole na ole mgbe ndị bi na 21 nọ na Quezon City - ọtụtụ n'ime ha bụ ndị na-akpata obere ego na ndị ọrụ na-ewu ụlọ, na-enweghị ike ịrụ ọrụ n'oge mkpọchi - ejidere maka ngagharị iwe na-enweghị ikike. Ndị otu oru Solidarity nke Filipino Workers (BMP) katọrọ njide ndị a, bụ nke kpalitere gọọmentị maka ịtụkwasị ndị ogbenye ọnụ na-arịọ maka enyemaka n'oge nsogbu ahụ.
Onye isi oche ahụ gwara ndị enyemaka chọrọ enyemaka ka ha nwee ndidi, na-arịọ ha ka ha “chere maka nnyefe ọ bụrụgodi na ọ na-egbu oge, ọ ga-abata ma agụụ agaghị agụ gị,” mana dọrọ ndị bi na ya aka na ntị “atụkwala gọọmentị ụjọ. Eso ndị gọọmentị aka mgba. Will ghaghi ifu. ”
Usoro mkpochi mkpochapu etinyela ndị niile bi na Luzon dị nde 57 ka ha "kewapụ iche nke ndị obodo," na-egbochi ije gburugburu agwaetiti ahụ ịzụta nri, ọgwụ na ihe ndị ọzọ dị mkpa, na imechi ụlọ ọrụ niile mana dị mkpa.
The Philippines kwadoro ihe karịrị 2,300 ikpe nke Covid-19 wee gụọ ọnwụ 96. Otú ọ dị, Healthtù Ahụ Ike Worldwa achọpụtala na n'ihi ọnụ ọgụgụ dị ala nke nyocha a na-eme ebe ahụ, enwere ike ị nwere ọtụtụ ọrịa na-efe efe, mana ọ sịrị na ọ tụrụ anya na nyocha "ga-aba ụba nke ukwuu na ụbọchị ndị na-abịanụ."